इलाममा भयो यस्तो रह’स्यमय दुःखद घ’टना, स्थानिय सबै त्र’सित – PathivaraOnline
Home > अपराध > इलाममा भयो यस्तो रह’स्यमय दुःखद घ’टना, स्थानिय सबै त्र’सित
इलाममा भयो यस्तो रह’स्यमय दुःखद घ’टना, स्थानिय सबै त्र’सित
admin March 11, 2020 अपराध, समाज	0
इलाम, २८ फागुन । इलाममा भएको एक र हस्य म घ टना ले सर्वसाधारण त्र सि त भएका छन् । फाकफोकथुम गाउँपालिका-५ लुम्देको कैंजस्थित एक घरको सिकुवा ९पिँढी० मा एक दम्पती मृ त अवस्थामा फेला परेका हुन् । बुधवार दिउसो अचानक दम्पत्ती मृ त फेला परेपछि स्थानिय त्र सि त भएका छन् ।
स्थानिय ३५ वर्षीय धनबहादुर खपांगी र उनकि पत्नी रिता मृ त अवस्थामा फेला परेका हुन् । उनीहरुको श व बुधबार दिउँसो सिकुवामा ल डे को अवस्थामा स्थानियले देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । दम्पतीको शरिरमा र सिकुवामा समेत र ग त पोतिएको अवस्थामा फेला परेका कारण उनीहरुको निधन र ह स्यम देखिएको प्रहरीले जनाएको छ।
घरमा आमासंग बस्दै आएका दम्पत्ती माथि आमा नभएको समयमा यस्तो घ ट ना भएको हो । घ टना को बारेमा अनुसन्धानका भइरहेको छ । त्यसको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले डिएसपीको हेमन्त भण्डारी क्षेत्रीको नेतृत्वमा टोली खटाएको छ। घोप्टो परेर ल डिर हेको मृ तक धनबहादुरले कम्मरमा खु कुरी को दा प भिरेको पनि देखिएको छ । मृ त कका १४ वर्षीय एक छोरा, ९ वर्षकी एक छोरी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
कोरोना भाइरसविरुद्ध हङकङमा बन्यो औषधी !
कोभिड–१९ सङ्क्रमणको कारण ४ हजार भन्दा बढी व्यक्तिको निधन भएको फ्रान्सेली समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ । यस भाइरसबाट एक लाख १४ हजार ४५८ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । यसमध्ये ६४ हजार १२० जना निको भएर घर फर्किएका छन् ।
यस भाइरस सङ्क्रमणका कारण विश्वभरी चार हजार २७ व्यक्तिको निधन भएको मङ्गलबार प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ ।
चीन समक्ष एकतर्फ संक्रमणलाई फैलन नदिनु चुनौती छ भने अर्कोतर्फ भाइरस नियन्त्रण गर्न । तसर्थ, उसले हुबेई र वुहानलाई विशेष ध्यान दिइरहेको छ ।शसहरलाई लगभग बन्द गरिएको छ र देशभरका हजारौं स्वास्थ्यकर्मीलाई त्यहाँ पठाइएको छ ।
यसैबीच, चिनियाँ वैज्ञानिकले कोरोना भाइरसविरुद्धको दुईटा ‘एन्टिभाइरस ड्रग’ को परीक्षण गरिरहेको स्वास्थ्य आयोगले उल्लेख गरेको छ । उसका अनुसार परीक्षणका प्रारम्भिक नतिजा केही सातामै आउने छ । वुहान अस्पतालका प्रमुखले संक्रमण भएर निको भएका बिरामीका ‘प्लाज्मा इन्फ्युजन्स’ ले सकारात्मक प्रारम्भिक नतिजा देखाएको बताएका छन् ।
त्यस्तै कोरोना भाइरसविरुद्ध हङकङले ठूलो सफलता प्राप्त गरेको छ । हङकङ युनिभर्सिटी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजीको अनुसन्धान टोलीले कोरोना भाइरस मा’र्ने एक एण्टी ब्याक्टेरियल लेपको बिकास गरेको छ । ग्लोबल टाइम्सका अनुसार एन्टी ब्याक्टेरियल लेपले (COVID-19) र अन्य भाइरसलाई मा’र्ने क्षमताको दावी गरिएको छ । हङकङको ७० वटा किण्डरगार्डेन, प्राथमिक र माध्यामिक विद्यालयमा यसको प्रयोग गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
यात्रुलाई सस्तो र सजिलै सेवा दिएको टुटल र पठाओ तुरुन्त रोक्न किन आयो सरकारको निर्देशन
सु हाग रा तकै दिन बुहारीमा जब छोराले यस्तो खोट देखेपछि … (भिडियो सहित)
भाइरल झाँक्री बारे गाउँले यी महिलाको यस्तो खुलासा, वि’रामीहरु घरमा आएपछि बस्न थाले चि’न्ता ! (भिडियो सहित)